सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउनेमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक : कुन बैंकको अवस्था कस्तो ? | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउनेमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक : कुन बैंकको अवस्था कस्तो ?
साउन ३१, २०७६ शुक्रबार ११:६:३५ | उज्यालो सहकर्मी
काठमाण्डौ – वाणिज्य बैंकहरुले धमाधम आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म सार्वजनिक विवरणअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सबैभन्दा धेरै नाफा कमाएको छ । सबैभन्दा कम नाफा कमाउनेमा सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक रहेको छ ।
गएको आर्थिक वर्षमा बैंकहरुको वित्तीय अवस्था :
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकः
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सबैभन्दा धेरै नाफा कमाएको छ । बैंकले गएको आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब ३२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकको नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४५.६१ प्रतिशतले बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा बैंकले तीन अर्ब ६५ करोड ९२ लाख खुद मुनाफा कमाएको थियो । बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा भने तीन अर्ब ६१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
समीक्षा अवधिमा बैंकले एक खर्ब ९० अर्ब तीन करोड १४ लाख निक्षेप संकलन गरी एक खर्ब ४४ अर्ब ४५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकले निक्षेप संकलन गर कर्जा प्रवाहमा क्रमशः १५.७२ र २३.०३ प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो । बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १२.२४ प्रतिशतले बढेर १० अर्ब २२ करोड ९५ लाख पुगेको छ ।
अहिले बैंकको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ४७ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने जगेडा कोषमा १३ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । खराब कर्जा ३.९० प्रतिशत रहेको बैंककोे आधार ब्याजदर ५.५० प्रतिशत, कोषको लागत ३.५२ प्रतिशत, पुँजी पर्याप्तता अनुपात १३.२० प्रतिशत, ब्याजदर अन्तर ४.४६ प्रतिशत र सीसीडी ७२.७८ प्रतिशत रहेको छ ।
कृषि विकास बैंकले गएको आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १९ दशमलव १५ प्रतिशतको वृद्धि हो । खराब कर्जा घटाइ २ दशमलव ९० प्रतिशतमा झार्न सफल भएको र स्प्रेडदरलाई व्यवस्थापन गरेका कारण मुनाफा छ । बैंककाअनुसार बचत खाताको ब्याजदरमा २ प्रतिशत वृद्धि तथा कर्जाको ब्याजदर समेत डेढ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतको हाराहारीमा घटाइएकोले करिब २० प्रतिशत बढी नाफा कमाउन सफल भएको हो ।
कृषि विकास बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को चौथो त्रैमासमा खुद मुनाफा ४ अर्ब ३५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनाभन्दा १९ दशमलव १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा ३ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ७ दशमलव ६२ प्रतिशतले बढेर ७ अर्ब ३७ करोड ३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने सञ्चालन मुनाफा १० दशमलव ८० प्रतिशतले बढेर ५ अर्ब ४७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ ।
बैंकको निष्क्रिय कर्जा २ दशमलव ९० प्रतिशत, जोखिमयुक्त सम्पत्ति २० दशमलव ३३ प्रतिशत, प्रतिशेयर आम्दानी ४४ दशमलव ६७ रुपैयाँ, मूल्य आम्दानीको अनुपात ९ दशमलव १६ गुणा, प्रतिशेयर नेटवर्थ ३१४ दशमलव १८ रुपैयाँ र तरलता अनुपात २८ दशमलव ९६ प्रतिशत रहेको छ ।
नबिल बैंकले गएको आर्थिक वर्षमा चार अर्ब २९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.८४ प्रतिशत बढी नाफा कमाएको हो । आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा नविलले तीन अर्ब ९८ करोड १८ लाख खुद मुनाफा कमाएको थियो । बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा भने तीन अर्ब १८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
अहिले बैंकको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब एक करोड १८ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने जगेडा कोष ९ अर्ब ३३ करोड २३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १७.१५ प्रतिशतले बढेर ७ अर्ब ३३ करोड ६० लाख पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा खुद ब्याज आम्दानी ६ अर्ब २६ करोड २० लाख रहेको थियो ।
समीक्षा अवधिसम्ममा बैंकले १ खर्ब ६४ अर्ब ३७ करोड ६० लाख निक्षेप संकलन गरेको छ। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिको भन्दा २१.९३ प्रतिशतले बढी हो ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक :
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ दशमलव ६६ प्रतिशतले घटेको छ । २०७४/७५ मा ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल इन्भेष्टमेन्टको गएको आर्थिक वर्षमा नाफा ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रह्यो । बैंकले सार्वजनिक गरेको गएको आर्थिक वर्ष वित्तीय विवरणअनुसार बैंकको नाफा ६.६६ प्रतिशतले गिरावट आएको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकले ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो। तर, गएको आवमा ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ। । बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब ३९ करोड ६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । १० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीबाट १२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगे पनि बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी ९ रुपैयाँले घटेको छ। साथै जगेडा कोषमा १० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ। बैंकले १ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी एक खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ।
एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले गएको आव २०७५/ ०७६ को चौथो त्रैमाससम्म आईपुग्दा खुद मुनाफा ३ अर्ब ४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनाभन्दा नाफा १७ दशमलव ९८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो ।
८ अर्ब १० करोड ६८ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको एभरेष्ट बैंकको, प्रिमियम २३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, रिटर्न अडिङ्ग २ अर्ब १८ करोड ८० लाख रुपैयाँ र जगेडामा ७ अर्ब १० करोड ५ लाख रुपैयाँ छुटाएको छ ।
हिमालयन बैंकले नाफामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा गरेको छ । बैंकले गएको आवमा २ अर्ब ८४ करोड नाफा आर्जन गरेको छ । बैंक अघिल्लो आव २०७४/७५ मा १ अर्ब ८७ करोड नाफा कमाएको थियो । बैंकले गएको आवमा २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा कमाएको छ ।
बैंकले गएको आवमा ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ भने संचालन मुनाफा ४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ८ अर्ब ५२ करोड चुक्ता पुँजी भएको बैंकको जगेडा कोषमा ५ अर्ब ३२ करोड रुपैंयाँ रहेको छ ।
हिमालयनले यो अवधिमा १ खर्ब ९ अर्ब निक्षेप संकलन गरेर ९२ अर्ब कर्जा लगानी गरेको छ । बैंकको खराब कर्जा १.२ प्रतिशत रहेको छ ।
ग्लोबल आईएमई बैंकः
ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडले गएको आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा खुद नाफातर्फ बैंकले ३३.०२ प्रतिशतले बढोत्तरी गरेको हो । अघिल्लो वर्ष बैंकको खुद नाफा २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ थियो ।
यस्तै बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । अघिल्लो वर्ष ५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमा सीमित सञ्चालन मुनाफालाई बढाएर बैंकले ६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । त्यस्तै, अघिल्लो वर्ष ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ रिजर्बको आकार घटाएर बैंकले ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा झारेको छ ।
बैंकले रिटेन अर्निङतर्फ ९४.२५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रिटेन अर्निङ रहेको बैंकको समीक्षा अवधिमा २ अखर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
बैंकले १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको ।
नेपाल बैंक :
नेपाल बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को चौथो त्रैमासको अवधिमा २ अर्ब ६१ करोड १९ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिको तुलनाभन्दा १८ दशमलव ७७ प्रतिशतले घटेको हो । अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा नाफा ३ अर्ब २१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ कमाएको थियो ।
९ अर्ब ८१ करोड ११ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको बैंकले प्रिमियम ३ अर्ब २६ करोड २८ लाख रुपैयाँ, रिर्टन अर्निङ ३ अर्ब १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ र जगेडा १३ अर्ब ३४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ छुटाएको छ ।
बैंकले निक्षेपमा १ खर्ब १७ अर्ब २० करोड ७ लाख रुपैयाँ संकलन गरी कर्जा ९२ अर्ब ४१ करोड ४० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलना बैंकले निक्षेपमा १८ दशमलव १८ प्रतिशतले र कर्जामा २२ दशमलव ६६ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।
स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकः
स्टाण्डर्ड चाटर्ड बैंकले एक वर्षको अवधिमा दुई अर्ब ४९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ मूनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथौ त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै दुई अर्ब ४९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खुद आम्दानी गरेको जानकारी दिएको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा स्टाण्डर्ड चार्टड बैंकले करिब १४ प्रतिशतले मूनाफा आर्जन गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बैंकले २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँमात्रै आम्दानी गरेको थियो ।
बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ६.८३ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ३ अर्ब २९ करोड ८० लाख हरेकोमा बढेर ३ अर्ब ५२ करोड ३१ लाख पुगेको छ । बैंकले जगेडा कोषमा पाँच अर्ब १७ करोड २८ लाख रुपैयाँ राखेको छ ।
एनएमबी बैंकले गएको आर्थिक वर्षको चौंथो त्रैमाससम्ममा खुद नाफा २४.६१ प्रतिशतले बढाएर दुई अर्ब ३१ करोड आर्जन गरेको प्रगति विवरण सार्वजानिक गरेको छ। बैंकले आम्दानीका सबैजसो सूचाङ्कहरुमा प्रगति गरेको छ भने कोषको लागत र खराब कर्जा घटाउँदै लगेर सन्तोषजनक प्रगति गरेको छ।
बैंकले निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह क्रमशस् १६.५७ प्रतिशत र २१.६९ प्रतिशतले बढाएको छ भने खराब कर्जा झनै घटाउँदै लगोको छ।
९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको बैंकले आफ्नो जगेडा कोष पनि मजबुत बढाउँदै लगेको छ। समीक्षा अवधिमा बैंकले जगेडा कोष ४२.०७ प्रतिशतले बढाएर ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ।
त्यस्तै बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात पनि १६.३८ गुणा घटेर १५.८६ गुणामा झरेको छ।
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले गएको आर्थिक वर्षमा २०७५/७६ को चौथो त्रैमाससम्ममा आइपुग्दा खुद मुनाफा २ अर्ब ३० करोड ८८ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । जुन गत वर्षको सोहिअवधिको तुलनाभन्दा नाफा २१ दशमलव २५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो । अघिल्लो वर्षको सोहिअवधिमा नाफा १ अर्ब ९० करोड ४० लाख रुपैयाँ कमाएको थियो ।
८ अर्ब ८८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको सिद्धार्थ बैंकको प्रिमियम १२ करोड २० लाख रुपैयाँ, रिटर्न अडिङ्ग १ अर्ब ६६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ र जगेडामा ४ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ छुटाएको छ ।
बैंकले निक्षेपमा १ खर्ब १४ अर्ब ९० करोड ४८ लाख रुपैयाँ संकलन गरी कर्जामा १ खर्ब ४ अर्ब ७६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । निक्षेपमा २१ दशमलव २७ प्रतिशतले र कर्जामा २५ दशमलव ३० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी ३६ प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब ६७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने संचालन मुनाफा २१ दशमलव ४७ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
नेपाल एसबीआई बैंकः
नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेडले गत आव २०७५/०७६ को चौथो त्रैमाससम्म आईपुग्दा खुद मुनाफा २ अर्ब ३० करोड ३६ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । जुन गएको वर्षको सोहिअवधिको तुलनाभन्दा नाफा १३ दशमलव ८४ प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा नाफा २ अर्ब २ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कमाएको थियो ।
८ अर्ब ४४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको नेपाल एसबिआई बैंकको रिटर्न अडिङ्ग १ अर्ब ८९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ र जगेडामा ३ अर्ब ८२ करोड १६ लाख रुपैयाँ छुटाएको छ ।
बैंकले निक्षेपमा १६ दशमलव २० प्रतिशतले वृद्धि गरी ९७ अर्ब ८८ करोड ८ लाख रुपैयाँ संकलन गरी कर्जामा ८४ अर्ब ३० करोड ५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । कर्जामा १६ दशमलव ६६ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी १४ दशमलव ५२ प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब ७४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने संचालन मुनाफा १३ दशमलव ४७ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब १३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
सानिमा बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को चौथो त्रैमास वित्तीय खुद मुनाफा २ अर्ब २४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनाभन्दा ३२ दशमलव १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा १ अर्ब ६९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
८ अर्ब १२ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको बैंकले रिर्टन अर्निङ १ अर्ब ६४ करोड २१ लाख रुपैयाँ र जगेडा २ अर्ब २५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ छ ।
सानिमा बैंकले निक्षेपमा १४ दशमलव ८० प्रतिशत वृद्धि गरी ८९ अर्ब ३७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ संकलन गरी कर्जा ८१ अर्ब २४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलना बैंकले कर्जामा २० दशमलव १९ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी ३५ दशमलव ९८ प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब १० करोड १ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने सञ्चालन मुनाफा ३२ दशमलव ७५ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब २० करोड ६३ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ ।
प्रभु बैंक लिमिटेडले गत आव २०७५/७६ को चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा खुद मुनाफा २ अर्ब ५ करोड ५ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । जुन गएको वर्षको यही अवधिको तुलनाभन्दा नाफा ११२ दशमलव ०४ प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो । अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा नाफा ९६ करोड ७० लाख रुपैयाँ कमाएको थियो ।
८ अर्ब ८९ करोड २६ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको प्रभु बैंकको रिटर्न अडिङ्ग १ अर्ब ७९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ र जगेडामा ३ अर्ब ८७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छुटाएको छ ।
बैंकले निक्षेपमा १५ दशमलव ५६ प्रतिशतले वृद्धि गरी १ खर्ब १२ अर्ब ३९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ संकलन गरी कर्जामा ८६ अर्ब ४१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । कर्जामा १९ दशमलव ४४ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी ६२ दशमलव १३ प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब ५६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने संचालन मुनाफा ६४ दशमलव ३९ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब ८६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
बैंक अफ काठमाण्डूः
बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को चौथो त्रैमासमा खुद मुनाफा १ अर्ब ९३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनाभन्दा ४६ दशमलव ७० प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा १ अर्ब ३२ करोड ११ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
८ अर्ब ६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको बैंकले रिर्टन अर्निङ १ अर्ब ३९ करोड १० लाख रुपैयाँ र जगेडाकोषमा ४ अर्ब ५५ करोड २८ लाख रुपैयाँ छुटाएको छ ।
बैंक अफ काठमाण्डूले निक्षेपमा ८२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ संकलन गरी कर्जा ७१ अर्ब ७३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा बैंकले निक्षेपमा ७ दशमलव ८९ प्रतिशतले र कर्जामा ९ दशमलव २३ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।
मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यसम्ममा १ अर्ब ७१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खूद मुनाफा आर्जन गरेको बैंकले यस आर्थिक वर्षमा ४० करोड १९ लाख रुपैयाँ मुनाफा बढाएको हो ।
बैंकले वितरणयोग्य मुनाफा बढाएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष ९२ प्रतिशतले वितरणयोग्य मुनाफा बढाएको हो ।
हाल मेगा बैंकले देशभर १०२ शाखा, १९ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर, १०३ वटा एटिएम सञ्जाल, ११९ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग केन्द्रहरु र २,५०० भन्दा बढी मेगा रेमिट एजेण्ट मार्फत आफ्नो सेवा तथा सुविधाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को चौथो त्रैमास अवधिमा बैंकको खुद मुनाफा १ अर्ब ७० करोड ३५ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनाभन्दा ३६ दशमलव ३२ प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो ।
अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा १ अर्ब २४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । ८ अर्ब ५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको बैंकले रिर्टन अर्निङ १ अर्ब ७० करोड ५७ लाख रुपैयाँ, प्रिमियम ३ करोड ८ लाख रुपैयाँ र जगेडा १ अर्ब ४५ करोड १५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी २९ दशमलव २० प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब ५३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने सञ्चालन मुनाफा ३३ दशमलव ९६ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब ४२ करोड २१ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । खुद ब्याज आम्दानी तथा सञ्चालन मुनाफा दुवैमा वृद्धि गरेको हुँदा नाफा पनि बढेको हो ।
सनराइज बैंकको नाफा १ अर्ब ७० करोड पुगेको छ । बैंकले गएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गरेको नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तुलनामा १५.५८ प्रतिशतले बढी हो । बैंकले गएको आवमा १ अर्ब ४७ करोड नाफा आर्जन गरेको थियो । बैंकको विवतरण योग्य नाफा भने १ अर्ब ११ करोड रहेको छ ।
बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट १३.६१ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सक्छ । बैंकले गएको आवमा ३ अर्ब ५९ करोड खुद ब्याज आम्दानीमा गरेको छ । अघिल्लो आवमा यस्तो आम्दानी २ अर्ब ८७ करोड रहेको थियो । बैंकको संचालन मुनाफा पनि बढाएको छ ।
बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २४८ रूपैयाँ रहेको छ भने, बैंकको जगेडा कोष९रिजर्भ फन्ट २ अर्ब ५८करोड रहेको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी २०।९४ रुपैयाँ रहेको छ ।
लक्ष्मी बैंक लिमिटेडले चौथो त्रैमाससम्म आईपुग्दा खुद नाफा १ अर्ब ५७ करोड ६० लाख रुपैयाँ कमाएको छ । जुन गएको वर्षको यही अवधिको तुलनाभन्दा ३३ दशमलव ४३ प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो । अघिल्लो वर्षको सोहिअवधिमा नाफा १ अर्ब १८ करोड १० लाख रुपैयाँ कमाएको थियो ।
८ अर्ब ९२ करोड ५ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको लक्ष्मी बैंकको रिटर्न अडिङ्ग १ अर्ब ५५ करोड १२ लाख रुपैयाँ र जगेडाकोषमा २ अर्ब १६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छुटाएको छ । बैंकले निक्षेपमा ७९ अर्ब ७४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ संकलन गरी कर्जामा ७५ अर्ब २२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी ३० दशमलव ५३ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने संचालन मुनाफा ३६ दशमलव ७७ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब ३० करोड २६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक एनसीसीले गत गएको आर्थिक वर्ष ०७५र७६ मा १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको छ ।
बैंकको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मुनाफा १ अर्ब ३४ करोड १५ लाख रुपैयाँ रहेकोमा करिब १३ प्रतिशतले मुनाफा बढाउँदै बैंकले १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको हो ।
एनसीसीको चुक्ता पुँजी अहिले ७ अर्ब १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ९१ दशमलव ४८ प्रतिशतले बढेर तीन अर्ब आठ करोड ८० लाख पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी एक अर्ब ६१ करोड २६ लाख थियो ।
एक वर्षको अवधिमा बैंकले ६७ अर्ब तीन करोड ५६ लाख निक्षेप संकलन गरेको छ ।
जनता बैंकले गएको आर्थिक वर्षको चौँथो त्रैमाससम्ममा खुद नाफा बढाएर सन्तोषजनक प्रगति गरेको छ। ग्लोबल आइएमई बैंकसँग मर्जर प्रकृयामा रहेको बैंकले अघिल्लो आवको चौँथो त्रैमाससम्म रहेको १ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफालाई १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा बढाएको वित्तीय विवरण सार्वजानिक गरेको छ ।
समीक्षा अवधिमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा ४ प्रतिशतले बढेर ९७ करोड २६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
चुक्ता पूँजी ८ करोड रुपैयाँ स्थिर रहेको बैंकले जगेडा कोष २६.३८ प्रतिशतले बढाएर अझै मजबुत बनाउँदै लगेको छ। उसको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह क्रमशस् ३० प्रतिशत र २६ प्रतिशतले बढेको छ भने निष्कृय कर्जा १.३२ प्रतिशतबाट घटाएर १.११ प्रतिशतमा झारेको छ ।
बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी १६ रुपैयाँ ८१ पैसा, प्रतिशेयर नेटवर्थ १३३ रुपैयाँ ५४ पैसा र मूल्य आम्दानी अनुपात १२।७३ गुणा छ ।
कुमारी बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एक अर्ब ३३ करोड ४० लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनाभन्दा २८ दशमलव ०४ प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा १ अर्ब ४ करोड १८ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
वित्तीय विवरण अनुसार कुमारीको खराब कर्जामा पनि सुधार आएको छ । अघिल्लो वर्ष १.०१ प्रतिशत रहेको निष्कृय कर्जाको अनुपात यो आर्थिक वर्षमा ०.९ प्रतिशत रहेको छ ।
प्राइम कमर्सियल बैंकले गएको आर्थिक वर्षमा आफ्नो नाफा बढाएको छ । बैंकले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३७ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो ।
बैंकको गएको आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकको वितरणयोग्य नाफा भने १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ । प्रतिशेयर आम्दानी २५ रुपैयाँ ३८ पैसा र नेटवर्थ १४५ रुपैयाँ ७२ पैसा रहेको बैंकले बैंकका रिजर्भ फन्डमा २ अर्ब ६० करोड ९४ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको छ ।